Nagu saabsan | Kunshan Gubang Qalabka Ilaalinta Teknolojiyada Co., Ltd.
Tan iyo markii la aasaasay, Yirentang waxaa ka go'an sababta daryeelka iyo kalgacalka kalgacalka leh iyadoo la raacayo mabaadi'da ganacsi ee "maskaxda lagu hayo wanaag iyo naxariis, jidhka la beero, iyo ku-dhaqanka wanaagga". Maaskarada 'KN95' oo ay soo saartay Yirentang ayaa ka gudubtay dhammaan imtixaannadii GB2626-2006, GB2626-2019 iyo heerka EU ee EN149: 2001 + A1: 2009. Shahaadada CE ayaa la shaqeynayaa waxaana caddeeyay SGS iyo ISO-9001-2015. Mr. Chu Jiuyi, oo ah aasaasaha Yirentang, wuxuu u hogaansamayaa mabaadii'da "caafimaadka bilaa wax yaabaha iyo waji duub ah si loo badbaadiyo nolosha dadka". Nadaafadda iyo badbaadada wax soo saarka maaskaro, falsafadda ganacsiga ee ah "in aan lagu mashquulin arrimaha aan muhiimka ahayn, oo aan lagu macaashin waxyaabaha liita", waxay u baahan tahay dhammaan dadka "Yirentang" in ay leeyihiin ixtiraam ay u hayaan alaabooyinka, aaney carruurtu ku ciyaareynin nolosha, muhiimadda ku xirno alaabta ceeriin, oo sifee turxaan kasta oo isku xira wax soo saar si loo hubiyo kaamilnaanta waxyaabaha.
U hogaansanaanta dawada dhaqameed ee Shiinaha ee ah "ilaalinta akhlaaqda iyo wanaagga" kaas oo faafiyay kumanaan sano, Yirentang wuxuu u hogaansamayay wacyiga is-edbinta ee "ilaalinta wanaaga iyo wanaaga maskaxda iyo kobcinta wanaagga jirka" tan iyo aasaaskeedii , oo si damiir leh ugu hogaansamey una ku dadaalaysay kaamil ahaanta sidii loo abuuri lahaa maaskarado fayadhowr oo damiir ku leh warshadaha isla markaana la jaan qaadaya heerarka caafimaadka ee caalamiga ah. Wax soo saarkiisa ayaa caan ku ah agabkooda tayada sare leh, faahfaahin aad u fiican iyo shaqo wanaag. In kasta oo badeecaduhu yihiin alaabooyin aan caafimaad ahayn, Yiren Tang weli waxay u hoggaansan tahay fikradda ah "ha ku mashquulin waxyaabo yar, ha noqon mid culus oo caajis ah", waxayna u baahan tahay dhammaan shaqaalaha inay yeeshaan xushmad nolosha iyo caafimaadka, fiiro gaar ah u yeelo tayada wax soo saarka, iyo in loo sameeyo kormeer iyo kormeer shaqsiyan si loo hubiyo wax soo saarka Badeecadu waa mid qumman oo kaamil ah, sidaa darteed dadka waaweyn iyo kuwa dhallinta yar lama khiyaaneeyo oo damiir nadiif ah leh.
Ku kori qalbi iyo wanaag
Magaca Yirentang wuxuu kujiraa ixtiraamka nolosha iyo caafimaadka. Yi wuxuu leeyahay macno gaar ah, si aan u noqono ilaaliyeyaasha nolosha iyo caafimaadka, oo ka madax banaan khalkhalka bulshada, oo aan si joogto ah ugu hogaansano aaminsanaanta caafimaadka; Naxariistu waa maskax naxariis leh, taas oo ah heer anshaxeed oo ay ku dhaqmayaan dhakhaatiirta caafimaadka ama soosaarayaasha wax soo saarka caafimaadka. Waxay dadka u qaadataa inay yihiin waxa ugu muhiimsan, waxay yareysaa wanaagga waxayna ilaalisaa ujeedkii hore. Tani ma aha oo kaliya calaamad, taas oo ka kooban dareen ujeeddo taariikhi ah, laakiin sidoo kale tilmaam qoys ee aasaasihii, Mr. Chu Jiuyi, iyo faraciisii. Waxay sii wadi doontaa ruuxa raadinta runta oo aan lagu xadgudbin. Si loo hubiyo tayada wax soo saarka, Yirentang maaskarada waxaa laga sameeyaa alaabada ceeriin oo leh heerka ugu tayada sareeya maanta. Dhammaan xiriiriyeyaasha wax soo saarka ayaa lagu dhammaystiray aqoon-isweydaarsiga boodhka ka-baxsan. Saddex habsocod oo tijaabo ah, oo kala ah baaritaanka alaabta ceyriinka ah, baaritaanka alaabada nus dhamaadka ah iyo tijaabada wax soosaarka ee dhammaaday, ayaa loo sameeyay si loo hubiyo in waji duubku uu buuxiyo shuruudaha xiriir kasta.
Ka raadso hal-abuurnimo
Intaas oo dhan, iyada oo ku saleysan fikradaha suuban ee dhaqanka wanaagsan, Yirentang wuxuu sameynayay tabo cusub oo wuxuu si joogto ah u sahaminayay alaab tayo sare leh iyo maaskaro caafimaad leh, taasoo horseed u ah isbeddellada moodada caafimaadka leh kuna dadaalaysa sidii loo abuuri lahaa nolol caafimaad leh oo raaxo leh. Taxanaha cusub ee dhowaan la sameeyay ee yrt2.0, isku xirnaanshaha maqaarka iyo ku-xirnaanshaha hawada ee lakabka gudaha ee maaskarada ayaa la xoojiyay. In kasta oo la hagaajinayo waxqabadka ilaalinta, waxay ka dhigeysaa isticmaalaha mid raaxo leh, oo ku habboon dadka muruqyada xasaasiga ah, waxayna ka dhigeysaa alaabada fayadhowrka inay u dhaqaaqaan dhanka wadada caafimaadka iyo raaxada leh, iyadoo la tixgelinayo baahiyaha iyo dareenka dhabta ah ee raaxeysiga isticmaalaha. Marxaladda hore ee cilmi baarista iyo horumarka, si loo wanaajiyo waxqabadka iyo khibrada waji-xidhka, dadka da 'kala duwan ayaa si gaar ah loogu xushay inay kaqeybqaataan tijaabada hore ee xirashada alaabada maaskaro, iyo in kabadan 30 xog ayaa si guud loo falanqeeyay si si adag loo hagaajiyo heerarka wax soo saarka.
Daacadnimo iyo masuuliyad
Bilowgii sanadka 2020, saameynta cudurka faafa ee taajka, warshadaha wax soo saarka daryeelka caafimaadka ayaa ku jiray jahwareer, iyo waxyaabaha maaskaro ayaa ugu horreeyay ee culeyska saara. Culeyska soo food saaray, Yirentang wuxuu had iyo jeer u hoggaansamaa mabda'a ah "inaan qiimaha la kordhin oo aan hoos loo dhigin heerka". Iyada oo dareen mas'uuliyadeed ah "aan kor loo qaadin qiimaha oo aan hoos loo dhigin heerka," Yirentang waxay ula dhaqantaa ganacsiyada si daacad ah waxayna ula dhaqantaa dadka isticmaala si siman, si ay shacabka u siiso waji nadiif ah oo ammaan ah oo aamin ah si ay uga gudbaan dhibaatooyinka. Sumcadda ayaa had iyo jeer ahayd aasaaska Yirentang cagtiisa bulshada iyo hogaaminta warshadaha. Wixii aan balan qaadno waa in la sameeyaa wixii aan dooneyno inaan qabanana waa in si wanaagsan loo qabtaa. Kaliya sidan ayaan ku guuleysan karnaa ammaan ballaaran iyo raalli gelin ka timaadda dadweynaha. Iimaanka wanaagsan waa aasaaska ganacsiga. "Yirentang" wuxuu kuu balan qaadayaa hadii aad iibsato calaamadan badeecada, haddii aad ku guuldareysato inaad ka gudubto jeegga barta iyo baaritaanka, waxaad heli doontaa lacag celin buuxda.
Yirentang wuxuu si firfircoon uga qayb qaataa howlaha daryeelka bulshada, wuxuu dejiyaa muuqaal bulsheed oo wanaagsan, dadkuna si weyn ayey u yaqaanaan, waxayna noqotay sumad lagu kalsoonaan karo ee alaabada caafimaadka ee warshadaha. Gudaha, waa inaan u adeegsano ruuxda Yirentang inaan ku dhiirrigelino shaqaalaha inay dejiyaan anshax caafimaad oo wanaagsan, wacyiga farsamada iyo ruuxa adeegga, dhiirrigelinta xamaasadda, dadaalka iyo hal-abuurka, oo aan kor u qaadno dareenka mas'uuliyadda bulshada.
Yirentang wuxuu ka hooseeyaa sumadda maaskaro ee loo yaqaan 'KN95 mask of Kunshan Gubang' ee waxsoosaarka difaaca Teknolojiyada Co., Ltd. shirkaddu waxay ku taal Kunshan Zhengyuan Chuanghui Technology Industrial Park, oo ka kooban guud ahaan aagga 9878 mitir murabac ah, oo ku dhowaad 2000 mitir laba jibbaaran loo isticmaalo wax soo saarka. oo ah maaskarada 'KN95', oo wax soo saarkeedu yahay 500000 gogo '. Hadda waxaa jira in ka badan 100 shaqaale. Dharka meltblown wuxuu qaatay sumcadda caanka ah ee dalka ka jirta (Jiangsu jinmeida New Material Co., Ltd.), badeecadahana waa la soo saaray Waxaa loo dhoofiyay in ka badan 20 dal, sida Mareykanka, Brazil, Australia, Canada, India, Japan, South Korea, Thailand, Vietnam iyo Malaysia, oo wadar ahaan iibkoodu ku dhow yahay 10 milyan.
Yirentang - ka dhig neefsashada caafimaad!